Taleefishinka Universal oo ka Hadlay Qaraxii Saakay loo Gaystay Cabdi Xamiid Karasaay (VIDEO)
March 12, 2017 – Agaasimaha Telefishinka Universal ee Bariga & Bartamaha Afrika C/laahi Xersi Kulmiye ayaa maanta ka hadlay qaraxii saakay loogaystay Suxuufi C/xamiid Maxamed Karasaay, qaraxaasi oo ahaa mid gaarigiisa loogu soo xiray.
Agaasimaha ayaa tilmaamay in qaraxan gaariga xalay lagu soo xiray, saakayna uu C/xamiid kula qarxay agagaarka Masaajidka Marwaas ee Degmada Xamar Weyne.
Waxaana uu agaasimahu xaqiijiyay in qaraxa lagu rakibay kursigii uu ku fadhiyay C/xamiid Maxamed Imaan, kaasi oo sheegay inuu ka dhaawacmay garabka illaa iyo sinta, hadana ay xaaladiisu tahay mid wel wel lahayn.
Agaasime C/laahi Xersi oo saxaafadda kula hadlaayay Magaalada Muqdisho ayuu sheegay in dhakhaatiirtu ay u sheegtay in xaaladda saxaafi C/xamiid Karasaay aysan ahayn mid daran.
Kulmiye oo la weydiiyay su’aal ahayd cidda qaraxan ku soo xirtay gaariga C/xamiid Karasaay, ayaa ku gaabsaday, sheegayna in ciidamada ammaanka ay wadaan baaritaano la xiriira qaraxaasi, isla-markaana aanay illaa iyo hadda haynin jawaab ku aadan qaraxaasi oo ay ka helayn laamaha amniga.
March 12, 2017 Geesey